Iifom ezisebenzayo zokuPhumela kweNjongo yeSikolo
Masibhekane nalo: abafundi bethu bahlala kwiimimandla eziphathekayo, eziphazamisekileyo zezixhobo ezigcinwe ngesandla, rhoqo ukutshintsha ubudlelwane boluntu kunye nokuguqulwa kwamanye amazwe kunye nesimo sengqondo. Indlela ebalulekileyo yokuphumelela kukuqonda indlela yokujonga iliso kwaye ukhethe impumelelo oyifunayo. Abafundi bethu, ngakumbi abafundi abaneziphene zokufunda, bafuna imfuneko yokuphumelela.
Ukufundisa abafundi ukusekela iinjongo bubulumko bokuphila obuya kuba luncedo kuwo wonke umsebenzi wazo. Ukubeka iinjongo zengqiqo, iinjongo ezixhomekeke kwixesha zifuna ukufundisa ngokuthe ngqo. Iinjongo zokubeka iinjongo zamaphepha apha ziza kunceda abafundi babe banamathele ngakumbi kwisicwangciso sokukora. Ukufikelela kweenjongo kuya kufuna ukucwangciswa nokuqhubekeka kokuqhubekayo.
Ukubeka iinjongo Iphepha lokusebenzela # 1
Ukubeka iinjongo Iphepha lokusebenzela # 1. S. Watson
Njengazo naziphi na izakhono, ubuchule kufuneka buboniswe kwaye buboniswe. Ishicilelo sokumisela isisombululo sichaza umfundi ukuba abone iinjongo ezibini eziqhelekileyo. Njengotitshala, uya kufuna ukucacisa:
Ingaba umfundi uya kuthatha uxanduva ngalezi njongo kumzali, utitshala, okanye oontanga?
Ngaba bonke abafundi bayacelwa ukuba bakhethe ixesha elifanayo? Okanye ngaba ezinye iinjongo zeveki enye kunye neenjongo zenyanga enye?
Ngaba kukho ukuqiniswa ukuphumeza iinjongo? Kwaye nje ukuqonda?
Ngaba abafundi baya kubabelana ngeenjongo kumaqela amancinci? Ngaba baya kufunda baze "bahlele" iinjongo zomnye nomnye? Oku kuya kubiza kwizakhono zentlalo ebalulekileyo, kubandakanywa intsebenziswano kunye nemibiko eyakhayo.
Ukubeka iinjongo Iphepha lokusebenzela # 2
Ukubeka iinjongo Iphepha lokusebenzela # 2. S. Watson
Lo mququzeleli ocacileyo usiza abafundi ukuba bajonge amanyathelo okubeka iinjongo kwaye babe nokuphendula kwiinjongo zokuhlangana. Ikhuthaza abafundi ukuba bacinge malunga nokufezekiswa, iinjongo ezinokulinganiswa kunye nenkxaso abayidingayo ukuhlangabezana nale njongo.
Mzekelo wo kubeka iinjongo
Sebenzisa ifom yeqonga leqela kwaye uqale ngecebo elingenasiphelo: kuthekani malunga nokutya "Ukutya isiqingatha sonke se-ayisikrimu kwisihlalo esinye."
Ingakanani inani elaneleyo lokuphuhlisa lo buchule? Iveki? Iiveki ezimbini?
Ziziphi na mathathu amanyathelo okufuneka uwathabathe ukutya isiqingatha sonke segrimu ye-ayisikrimu kwisihlalo esinye? Ukusila ukudla okutya phakathi kokutya? Ukunyuka nokuhla kwezitebhisi eziphindwe kabini ukuzondla ukutya? Ngaba ndinokubeka "umgca wendlela?"
Ndiyazi njani ukuba ndiyifezile ngempumelelo injongo? Yintoni eya kundinceda ndifike kwiinjongo? Ngaba unene ukukhwabanisa kwaye uvele ubeke "encinci" encinci? Ngaba uya kuphumelela umncintiswano wokutya we-ice cream?
Ukubeka iinjongo Iphepha lokusebenzela # 3
Ukubeka iinjongo Iphepha lokusebenzela # 3. S. Watson
Esi sihloko sokusekwa komsebenzi siklanyelwe ukunceda abafundi bajolise kwiinjongo zokuziphatha nezemfundo eklasini. Ukubeka ilindele ukuba ngamnye umfundi uza kugcina enye injongo yokuziphatha kunye neyokuziphatha enye iya kubangela abafundi ukuba bagcine "iso kwi-prize" ngokwempumelelo yokuqonda.
Ngethuba lokuqala abafundi babeka ezi zimbini iinjongo abaya kulufuna ulwalathiso oluninzi ngenxa yokuba ubunzima babo bunzima malunga nokuziphatha okanye ubuchule bezemfundo kwaye abanakukubona. Abazi nje into abanokutshintsha, kwaye abazi nje ukuba zithetha ntoni okanye zibukeka njani. Ukunika izibonelo ezinokwenziwa kunceda:
Khumbula ukuphakamisa isandla sam xa ndifuna ukujoyina ingxoxo 8 kwizilingo ezili-10.
Yiya kwiklasi ngexesha 4 kwiintsuku ezingama-5 ngeveki.
Ukuphucula amanqaku am isipelo kuma-80 ekhulwini.
Ukwandisa ubude bam izivakalisi kumanyathelo amaphepha angamajelo angamazwi angama-10.
Ingqwalasela yeMfundo yaBantwana abaselula
Isingeniso kwiMigangatho yeeNkonzo eziPhezulu
I-Augusta National Golf Club Par-3 Inkambo
Uluhlu lokuFunda kubantu basePagan
Iprojekti yomlilo weSanitizer Hand
Yiyiphi i-Good LSAT Score?
Imithombo yamabanga aPrayimari neeSekondari: Intsingiselo yabo kwimbali
Imibuzo yemibuzo ngesiNgesi
Indlela yokwenza i-Jazz Square eyintloko
Indlela yokuchonga iiMinerali eziBomvu neeNtsundu